Niditra hopitaly ny rain'i Vola. Voan'ny aretina "mivonto antsavy". I Dera no nanolo-tena hiandry azy iny andro voalohany nidirany hopitaly iny. Tsy natory nandritra ny alina, noho ny fandinihany manokana ny zava-mitranga eny anivon'ny hopitaly sy ny tontolony.
Nataon'i Bary toera-pialana voly ny tokantranon'i Dera sy Vola, ka nentiny avy hatrany tsy nierany tamin'izy ireo ny namany roa lahy, miaraka amin'ny karatra filalaovana sy ny tavoahangin-toaka. Nilaozan'i Vola hamangy ireo ray aman-dreniny ireto vahiny hafahafa, izay tsy nankasitrahany mihitsy. Ny rainy rahateo, tao anatin'ny tsy fahasalamana.
Nosokirin'i zaobavin'i Vola ny resaka kabary hoataon'i Dera nifanaovan'izy ireo tany Ambatomainty, raha nifanena teny an-dàlana izy ireo. Tapaka teo ny hevitra fa hiara-hisakafo any amin-dry Dera sy Vola izy ireo, ary amin'izay no hifanazavazavana sy hifampidinidinihana momba izany.
Pejy 4 amin'ny 66